इतिहासकै क्रूर जातीय नरसंहारको इतिवृत्तान्त - Rautahat News
‘इतिहासकै क्रूर जातीय नरसंहारको इतिवृत्तान्त’
४ असार २०७७, बिहीबार ०६:३५
लकडाउनको समय । सवारी सञ्चालनमा थिएनन् । तर सोती गाउँ उक्लिनुपूर्व करिब ३७ किलोमिटरको दुरी पार गरी भेरी नदी किनारसम्म झर्नुपर्छ । जहाँ विकासशील मटेला बजार छ । तर, नवराजहरू मटेला बजारसम्म पुगेनन् । बरु, मटलाबाट लोकेन्द्र साथीहरु बाकेर ढल्ला पुलनेर उक्लिए । त्यही पुलमा भयो नवराज र लोकेन्द्रको समूहको जम्काभेट । नवराजका साथी सुदीप खड्का भन्छन्, ‘ढल्ला पुलमा त्यस्तै साढे एक बजे भेट भएका थियौं ।’
नवराज यस्ता व्यक्ति थिए जो हाइजम्प, फुटबल, पौडी, कबड्डी र भलिबलमा उत्कृष्ट भएका दुई दर्जन बढी सर्टिफिकेट हात पारिसकेका थिए । आर्मीले खेलकुदमै उत्कृष्ट र अनुशासित भएबापत विद्यार्थीलाई दिने तीन महिना तालिम लिने ‘राष्ट्रिय सेवा दल’का क्यादर पनि थिए उनी ।
प्रमाण पत्र देखाउदै नवराजकी आमातर, गोपाल बुढाथोकी भने खै के सोचेर हो, ढल्ला पुल तरेपछि आफ्नो घर फर्किए । गोपाललाई हात हल्लाउँदै १८ जना युवाको समूह मध्यपहाडी करिडोरको बाटो जिउला बस्ती पार गरी स्याल खोलासम्म पुग्यो । करिब पाँच किलोमिटरको दुरी पार गर्दै ।
रुकुम(पश्चिम) चौरजहारी नगरपालिका – ८, सोती गाउँमा । पुरानो दरबार शैलीको घरलाई रातो माटो र कमेरोले पोतिएको छ । ढुंगा बिच्छ्याइएको घरको कम्पाउण्ड सलक्क छ । तीनतले घरको दुईपाते ढुंगाको छाना छ । घर छेउबाटै कच्ची मोटरबाटो सोझिएको छ । गृष्माको घर यही हो ।
नवराजको समूह त्यही मोटरबाटोमा रोकियो । ग्रिष्माकी आमा प्रकाशी मल्लले देखिहालिन् । सँगै पुगेका महेश कार्की भन्छन्, ‘गृष्माकी आमा घरछेउबाट चिच्याउनुभयो – तिमीहरू डुमलाई अस्ति कुटेर पुगेन ! मार्नै पर्ने हो …..। हामी गाली सहन नसकेर फर्कियौं । भयो, बिहे पछि गरौंला भन्दै ।’
परीक्षा सकिएलगत्तै गृष्माका भाइ लक्षुमान नवराजको घरमा बस्न पुगेको उनकी भाउजू बताउँछिन् । एक हप्ता बढी विताएपछि नवराज नै लक्षुमान(१३)लाई सोती गाउँमा पुर्‍याउन पुगेका थिए । गाउँलेहरुका अनुसार केही दिन बसेपछि नवराज नै लक्षुमानलाई सोती गाउँमा पुर्‍याउन पुगेका थिए । नवराजले लक्षुमानलाई परिवारको जिम्मा लगाउन नपाउँदै वडा अध्यक्ष डम्मर मल्ल झुल्किए । केटीको घरभन्दा दुई घर तल छ नीलो रङले पेन्टिङ गरिएको वडाध्यक्ष डम्बर मल्लको घर । तत्कालीन माओवादीका जनमुक्ति सेना हुन्, उनी ।
चौरजहारी प्रहरीबाट फोन आएपछि नवराजकी आमा उर्मिला झसंग भइन् । हुत्तिँदै आफ्नो छोरालाई छुटाउन अर्को दिन ११ बजे नै पश्चिम रुकुमको चौरजहारी प्रहरी चौकीमा हाजिर भइन् । उर्मिलालाई तत्कालै आफ्नो छोरा घर लिएर जान मन थियो । एउटा छोरा नवराजलाई काँडाले सानो घाउ बनाउँदा पनि उर्मिला अत्तालिन्थिन् । तर साँझ पाँच बजेसम्म कुर्दा पनि प्रहरीबाट छुटाउने सुरसार देखिएन । किनकि, थुनाउने मानिस नै त्यहाँ उपस्थित थिएनन् ।
प्रेमले बोलाएपछि प्रेमकै बलले नवराज फेरि जेठमा सोती पुगे । प्रहरीका अनुसार ०७५ पुसदेखि नवराज र गृष्माको औपचारिक रुपमा प्रेम रहेको देखाउँछ । र, दुईपटक नवराजकै घरमा पुगेर रात विताएकी थिइन् ग्रुिष्माले । एक पटक मेला हुँदा र अर्को पटक नवराजको आन्टिको छोराको जन्मदिनमा । काकी पूर्णिमा विक भन्छिन्, ‘सानो गुडिया पनि उपहार ल्याइदिएकी थिइन् ।’ त्यतिबेलाको ग्रिष्माको व्यवहारले उर्मिलालाई बुहारकिो झल्को मेटाउँथ्यो ।
तर, १० गते आफ्नो प्रेमिकाको अनुहार पनि हेर्न नपाई नवराज बाटोबाटै सिधै पूर्वतिरको बाटो लागे । धुलाम्मे मोटरबाटैबाटो ।
त्यहाँबाट पाँच मिनेट झरेपछि विनोद मल्लको घर आउँछ । यो तीन घरको बस्ती हो । विनोदकी फुपु चन्द्राका अनुसार नवराजको समूह विनोदको घरमा पुग्यो र विनोद नभएको खवर पाएपछि सिधै जंगलको बाटो झर्‍यो ।
भेरी नदी पुग्नका लागि करिब एक किलोमिटरको मकैबारी फाँट पार गर्नुपर्छ । उनीहरू त्यही फाँटतर्फ दौडिए । छेउमै गोइरी जिउलाका स-साना दुई गाउँ छन् । तर, आक्रोशित समूहको घेराबन्दीसामु उनीहरूको गति धीमा बन्यो । मकैबारी, धुलाम्मे सडक, भेरी नदीको किनार रणमैदान बन्यो । । सोतीकै गोइरी जिउलाबासी रमिते बने । सोतीको चारदेखि पाँचवटा गाउँ नवराजको समूहमाथि खनिएको प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ ।
र, पनि पाँचजना नदी पार गर्न सफल भए । पाँचजना नदिबीचको भंगालोमै अड्किए । उनीहरू एकै स्वरमा भन्छन्, ‘तर हत्या भएका ती ६ जनालाई हामीले कतै पनि देखेनौं ।’
यो पनि पढ्नुहोसनवराजकी प्रेमिकाको वयान : ‘भोलिपल्ट उनको मृत्यु भएको सुनेँ’
त्यसपछि मात्र प्रहरी चौकीको असईको नेतृत्वमा चारजना प्रहरी साढे छ बजे मात्र घटनास्थलमा पुग्छन् । घाइते गोविन्द सुनार भन्छन्, ‘प्रहरीले पारिबाट सिठी फुकेको थियो । हामीमाथि कुटपिट भइरहेको थियो ।’ दुई जनालाई प्रहरीले बाटो नेरै कुटपिटकै अवस्थामा भेटाएको थियो ।
उनको प्रेम शान्तसँग भेरीको सुसाहतसँगै अलप भएको थियो । नवराजका बाबा भन्छन्, ‘हात भाँच्चिएको थियो । टाउको ढुंगाले थिचेको थियो । टाउकोमा गहिरो खोपिल्टो परेको थियो ।’ प्रहरीको रिपोर्टले भन्छ, ‘रातको एक बजे शव नवराजकै हो भन्ने सनाखत भयो ।’
अर्कोदिन आठ बजे मात्र जाजरकोटको प्रहरीले नवराजको मुचुल्का उठायो । यता पश्चिम रुकुमले साढे सात बजे १० जनाको अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा पठायो । ठकबहादुर भन्छन्, ‘हामीले घटनास्थलमा एउटा सग्लो र एउटा भाँचिएको लाठी भेटायौं ।’
नवराजलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोट पुर्‍याउँदा दिउसोको दुई बजिसकेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोसगृहको प्रतिवेदन : रुकुम घटनाको योजनाकार वडाध्यक्ष !
नवराजको घर तल्तिर सञ्जु, त्योभन्दा तल गणेश बुढा मगरको घर छ । एनसीसीमा छनौट भई सँगै तालिम लिने गणेश बुढा पनि थिए । खेलकुदका पनि हितैसी । २३ गते उनको घर पुग्दा पाँच सय रुपैयाँको डेरामा गणेशको फोटो छेउमा अगरबत्ति बलिरहेको थियो । त्यो कोठामा सुत्ने खाटसम्म थिए ।
जेठ २३ गते पाँच सय रुपैयाँको डेरामा गणेशको फोटोको छेउमा अगरबत्ती बलिरहेको थियो । कोठामा सुत्ने खाटसम्म थिएन ।
गणेशको बाबा-आमा दुवै घरको मिस्त्री काम गर्थे । उनीहरु बिहानै सात बजे घरबाट निस्कन्थे । ११ बजे खान खान पुग्थे अनि फेरि रातिमात्र डेरा फर्कन्थे । १० गते भने आमा राधिकाले खशीको मासु लगेर पकाउन अह्राएकी थिइन् । तर, गाणेश अलि पछि गरौँला भनेका थिए । छोराको सुरसार नदेखेपछि चार बजे फेरि राधिकाले छोरालाई फोन घुमाइन्, ‘बाबु बेलुकीलाई खशी मासु लगेर पकाएर राख है !’ गणेशले फोनमै जवाफ फर्काए, ‘आज कुदुतिर आएको छु, अलि ढिला हुन्छ होला । नआउन पनि सक्छु ।’
लोकेन्द्रका शव भेरी किनारसम्म तानेका गणेश भन्छन्, ‘उसको शवबाट रगत बगिरहेको थियो । कुटाइले अण्डकोष सुन्निएर बेलुनजस्तो भएको थियो । शरीरभरी हेर्नै नसक्ने विभत्स चोट थियो । हात पछाडि लगेर डोरी बाँधिएको थियो । हामीले लास झिक्दा चुडियो ।’
त्यतिबेलासम्म देशव्यापी रुपमा हत्याको विरुद्ध आन्दोलन उर्लिसकेको थियो । मृतकका आमाहरु दैनिकरुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदै न्याय माग्न थालेका थिए । घाइतेहरूको वयान दिँदैमा दैनिकी बित्थ्यो । कहिले पुलिसलाई, कहिले अधिकारकर्मीलाई, कहिले मिडियालाई, कहिले….. ।
शवको खोजीमा खटिएका सुवर्ण रोकाया अचम्म मान्दै भन्छन्, ‘दिनदिनै त्यो एक एक कुनाकाप्च हेर्दै हिँड्यौं, देखिएन । तर, एक्कासी २० गते त्यो ठाउँमा कसरी शव आइपुग्यो ? शव निकाल्नेहरुका अनुसार गोविन्दको घाँटी भाँचिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस‘रोइकराइ गरिरह्यौं, वडाध्यक्षलगायतले ढुंगा र हँसियाले हान्न छाडेनन्’
अपडेट : मोरङको गोठगाउँबाट कोरोना ठीक भएका ४० जना डिस्चार्ज